आफ्नै छोरा बुहारिले एसो भन्दै घरनिकाला गरे, बुढेसकालमा भगवानकै भरमा झुपडिमा बास !! (हेर्नुस् भिडियो ) – Khabar28media
आफ्नै छोरा बुहारिले एसो भन्दै घरनिकाला गरे, बुढेसकालमा भगवानकै भरमा झुपडिमा बास !! (हेर्नुस् भिडियो )
June 23, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
आमा बाबा भनका जिउदा भगवान हुन आमा बाबाको सेवा गरेपछि कतै म मन्दिर जानुप्रदैन् भन्ने उखान सुनेका छौ । आजको २१ औं शताब्दिमा यो सबै कसैले सुन्न चाहादैन् सके सम्म आफ्ना जन्म दिने आमा बाबा सग बस्न कसैलाई मन लाग्गदैन वृद्दा लयमा खाख्ने फेसन चलेको छ । बाबा आमा वृद्द भएपछि छोरा छोरी अ लग बस्न रु चाउन्छन् ।
त्यस्तै एउटा भर्खरैको कुरा हो यहि लकडाउनमा आफ्ना बाबा धेरै खोकेर अफिसको काममा बाधा आयो भनेको समाचार पनि हामीले हेरेका छौ । आमा बाबा बाट धेरै टाढा बस्न मनपराउन्छन् आज भोलिका सन्तान तर सबै उस्तै हुदैनन् केहि त आमा बाबा लाई भगवना मानेर पुजेका छन् ।
गुल्मि जिल्ला हुलाकिमा बस्ने यी बृद्ध बुवाको कथा अलिकति फरक छ ।कोहि छोराछोरी नपाएर दुख पाएका हुन्छन् तर यी बुवाको भने छोरा बुहारि वरिपरि हुदैगर्दा पनि भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रीमती बितेको २ बर्ष भयो दुुई छोरा छन् छोराहरु काठमार्डौ बस्छछन् बुुहारीहरुले बचन लगाउन्छन् मन दुख्छ म तिनीहरुमा बस्न नसकेर छुटै बस्ने गरेको छु हामीलाई कसले माया गर्छर डाढा पारिको डुब्न लागेको घाम लाई । यस्तै रहेछ जिन्दगी ।
आँखा समेत राम्रो नदेख्ने यी बृद्ध बुवा कहिलेकाही बिरामी पर्दा खाना पकाउन नसक्दा भो कै पनि सुत्ने गर्छन् ।दुख बिमारी हुदा भगवानले हेर्दाहुन भन्दै उनी इश्वरको भरोसामै आफ्नो जीवन बेथित गरिरहेका छन् ।दुई छोराका पिता यी बृद्ध बुवालाई घरमा बस्ने बुहारिले नराम्रो व्यवहार गरेपछि मन दुखेसगै एक्लै बस्दै आएका हुन् ।
Previous Article विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी शिक्षिका घर पुग्न पाईनन् (हेर्नुहोस् भिडियो)
Next Article तनहुँ श्रीमाया आलेलाइ के भयो यस्तो ? उपचार गर्न पैसा छैन, सकेको सहयोग गर्नु नसके सेयर गरिदिनु